Membership - चार कोठा
हाम्रोमा आउने जिज्ञाशाहरु
Membership भनेको के हो?
यो हाम्रो कम्पनिको एउटा सेवा हो।
यसको शुल्क लाग्छ कि नि : शुल्क सेवा हो ।
शुल्क लाग्छ । रु 2000 तिरेर 1 महिना सम्म यो सेवा उपभोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
यो सेवाबाट के फाईदा पाईनछ ?
हाम्रो वेबसाईटमा धेरै प्रपर्टीहरु ( कोठा, फ्ल्याट, घर, जग्गा इत्यादी ) को जानकारीहरु हाम्रो सदस्यहरुलाई मात्र उपलब्द गराऊछौ । Membership लिए पछि तेस्तो प्रपर्टीहरुको सबै बेहोरा हेर्न मिल्छ । साथै प्रपर्टी धनि संग सिधै सम्पर्क गरेर आफुले लिन सकिन्छ ।
हाम्रो website मा हरेक दिन हजारौ मान्छेहरु प्रोपर्टी खोज्न आउछन । राम्रो राम्रो प्रोपर्टीहरु website मा राखेको 30 मिनेटमा बुक भैसकको हुन्छ । अलिक ढिलो हुदा पनि तेस्तो प्रोपर्टीहरु अरुले लागि सकेको हुन्छ । Member भए पछी members हरुको लागि मात्र प्रोपर्टीहरु हेर्न मिल्ने निजि बनाई दिएको हुन्छ । तेसैले member भैसके पछी राम्रो राम्रो प्रोपर्टीहरु पाईने सम्भावना बढी हुन्छ ।
साथै हरेक दिन हाम्रो website मा दर्जनौ नया प्रोपर्टीहरु राखेको हुन्छ । Member भए पछी एस्तो सयौ बिशेष प्रोपर्टीहरु महीना भरी हेर्न मिल्छ ।
मैले खोजेको जस्तै प्रपर्टी पाउने guarantee हुन्छ त ?
यो सेवा “खोजेको जस्तै पाउछ भनेर guarantee दिने सेवा होईन” । यो सेवा लिए पछि यस website मा आफ्नो सदस्यहरुलाई छुटाई दिएको प्रपर्टीको धनिको सम्पर्क नम्बर सिधै प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ । तेसैले सेवा लिनु भन्दा पहिले आफुले खोजेको जस्तो प्रपर्टी या पाउने सम्भावना कत्तिको छ भनेर खोजि गर्नु होला । यसमा भनको बायेक अरु कुनै guarantee दीएको छैन ।
म पैसा तिर्न चाहन्न तर मलाई प्रपर्टी चाहियो ।
हाम्रो वेबसाईटमा धेरै प्रपर्टीहरुको घरधनीको जानकारी पनि राखी दीएको हुन्छ । त्यो मध्ये तपाईले लिनसक्नु हुन्छ । पैसा पर्दैन ।